महिलाले नांगै नुहाउन पाउने–नपाउने विषयमा जनमत संग्रह, नांगै नुहाउन पाउने फैसला, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
महिलाले नांगै नुहाउन पाउने–नपाउने विषयमा जनमत संग्रह, नांगै नुहाउन पाउने फैसला
बीबीसी। स्विमिङ पुलमा महिलाहरुले नांगै नुहाएको विषयको विवादले उग्ररुप लिएपछि प्रशासनले सो विषयमा भोटिङ गर्नु परेको समाचार छ। र उक्त भोटिङमा ‘टपलेस स्नान’ को पक्षमा उभिएको महिलहरुको जित भएको छ।
यो घटना क्याटेलोनियास्थित बार्सिलोना नजिकैको गाउँको हो। लामेतिया–डिल–व्यालियास गाउँमा भएको यस्तो मतदानमा महिलाले स्विमिङ पुलमा नांगै नुहाउन पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा ६१ प्रतिशत र विपक्षमा ३९ प्रतिशत मत प्राप्त भएको बीबीसीले जनाएको छ।
स्थानीय क्याटेलन प्रशासनले यो मतदानको आयोजना गरेको थियो। यसको नतिजा कानुनी रुपमा १६ वर्षभन्दा माथिका महिलामाथि लागू हुन्छ।
गत वर्षको गर्मीको मौसममा दुई महिला स्विमिङ पुलमा नांगै नुहाउँदै थिए त्यही क्रममा स्विमिङ पुलका लाइफगार्डले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए।
त्यसपछि तत्काल प्रहरी पुगेर ती महिलालाई बिकिनी लगाउन आदेश लिएका थिए। उक्त घटनापछि प्रहरी र स्थानीय प्रशासन विरुद्ध स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरे। गाउँमा महिला र पुरुषहरुको एक समूह यसको विरोधमा बिकिनी टप लगाएर स्विमिङ पुलमा पुगेर विरोध जनाउने गर्थे। उनीहरुले यो विषयमा जनमत संग्रह गर्न दवाब दिने गरेका थिए। यो गाउँ बार्सिलोनादेखि उत्तरमा ३५ किलोमिटर टाढा छ र यहाँ करिव आठ हजार मानिस बसोबास गर्छन्।
मेलम्चीको बाँकी काम नेपाली निर्माण कम्पनीबाटै गराउन सरकारलाई राष्ट्रिय सरोकार समितिको निर्देशन